समाजवादको नयाँ मोडल आवश्यक: डा. भट्टराई (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
समाजवादको नयाँ मोडल आवश्यक: डा. भट्टराई (भिडियो सहित)
काठमाडौैं भाद्र ०३ । डा. बाबुराम भट्टराईले समाजवादको नयाँ मोडल खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउउनुुुभयो । बिहीवार समाजवादी केन्द्र, नेपालले आयोजना गरेको ‘एक्काइशौं शताब्दीको माक्र्सवाद र समाजवाद’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ समाजवादको मोडल खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । नेताहरुले पुराना पार्टीको चुनाव चिन्ह छोड्न गाह्रो मानेको भन्दै उहाँले क्षणिक पार्टीगत र चुनावी स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समाजवादी केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर समाजवादको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।